Xeerka Tahriibta by A M SALAD - Issuu
DOWLADDA PUNTLAND EE SOOMAALIYA XAFIISKA MADAXWEYNAHA
PUNTLAND STATE OF SOMALIA OFFICE OF THE PRESIDENT
Xeer Madaxwayne Lr------- 6dii Nofembar 2010, kuna saabsan Xeerka Tahriibta. Madaxweynaha Dawladda Puntland Markuu arkay
Dastuurka Dawladda Puntland;
in xaaladaha nabad-gelyo xumo ee dalka ku Soo kordhay, taasoo horseedi karta in Puntland ay noqoto hoy-tahriibeed;
Marxaladda la marayo ee la xiriira tahriibta
Qaanuunka soo socda : Qodobka-1aad Macnayn 1. Tahriibayaal waxaa loola jeedaa dad doonaya in ay si sharci darro ah uga dhoofaan xeebaha Puntland. 2.
Tahriib-qaadayaal waxaa loola jeedaa dad haysta gaadiid-badeed, berri oo ay ku qaadaan dadka tahriibaya, iyadoo ujeedadoodu tahay si ay dhaqaale uga helaan. Qodobka-2aad Celin Tahriibayaal
Qof kasta oo raba in uu Puntland ka tahriibo oo ay ciidamada amnigu qabtaan, waxaa loo celinayaa halkii uu ka yimi, marka laga reebo dadka loo aqoonsaday qaxootinimo waafaqsan heshiiskii Jineefa (Geneva1949), kana diiwaangashan hay’adda UNHCR iyo Wasaaradda Amniga iyo DDR ee Puntland.
2. Dadka qaxootiga ah ee ka diiwaangashan hay’adaha ku xusan qodobkan, faqradiisa kowaad ee ku xadgudba xeerkan iyo qawaaniinta dalka waxay muteysanayaan ciqaabta xeerka tahriibta iyo shuruucda kale ee Dawladda Puntland.
Qodobka 3aad Dhibanayaasha Safarka Tahriibta 1.
Qof kasta oo qaada tahriibayaal safarka dhexdiisana u geysta qof kale dil dhimasho keenay, maxkamadda horteedana ay kaga cadaato waxaa la marinayaa xukunka Shareecada Islaamka.
Qof kasta oo qaada tahriibayaal, una geysta waxyeelo isugu jira mid jireed, maskaxeed iyo moraal muddada safarka ee berriga iyo badda lagu jiro, waxa uu muteysanayaa ciqaab xarig 3--5 sano, iyadoo ay u dheer tahay magdhowga dhibtii uu geystay.
Cid kasta oo abaabusha, fududeysa, gacan ka geysata tahriib-qaadidda waxaa lagu ciqaabayaa xarig gaaraya 1 ilaa 3 sano . Qodobka 4aad Tahriib-qaade Qof kasta oo fal-dambiyeed tahriib-qaadis ah gala ama lagu qabto oo aan geysan tacadiyada ku xusan faqradaha 1-aad iyo 2-aad ee qodobka 3-aad ee isla xeerkan, waxaa lagu ciqaabayaa xarig u dhaxeeya 2 -- 5 sano. Qodobka 5-aad Hanti La-wareegid Waxaa lala wareegayaa hanta kasta oo lagu galay fal-dambiyeed la xiriira Tahriibta (Gaadiid Badeed, Barri, Cir ama qalab kale) Qodobka 6-aad Burin Waxaa la buriyay xeer kasta oo ka horimanaya ama aan la socon karin xeerkan. Qododka 7aad Dhaqangal Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka Golaha Wakiilladu ansixiyo, Madaxweynaha Dawladda Puntland saxiixo Faafinta Rasmiga ahna lagu soo saaro.. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Madaxweynaha Dawladda Puntland
A M SALAD